पूजा ‘योनी’ को पनि हुन्छ – Globalpatrika
– रमण पनेरू
धर्मको फरक किसिमले विवेचना सुरू भएको अहिले भर्खरै होइन। यो अलि अघिदेखि नै चल्दैछ। नेपाली समाजमा बरू धर्मलाई नारीवादी दृष्टिकोणले हेरिन थालेको भने धेरै भएको छैन। यो आफैंमा नराम्रो होइन। तर, बिना अध्ययन तर्कका लागि तर्क गरिनुले कसैलाई काहिँ पुर्‍याउँदैन। बरू त्यसले धर्मको अल्पज्ञान मात्रै बाँड्ने काम गर्छ। तसर्थ यो लेखकको प्रयास भनेको उक्त लेख मार्फत ठड्याइएका केही प्रश्नहरुको उत्तर दिनु हो।
शिवलिंगको अर्थ शिवको जननेन्द्रीय भन्ने अर्थ गलत हो। भारतीय धर्म गुरू शद्गुरुले यसलाई शिवको चिन्ह मान्छन्। जस्तो पुलिंग र स्त्रीलिंगमा लिंग भन्ने शब्दको अर्थ चिन्ह भन्ने हुन्छ न कि पुरुषको जननेन्द्रीय, त्यस्तै शिवलिंगमा पनि लिंगको अर्थ चिन्ह भन्ने हुन्छ। पुरूष जननेन्द्रीयलाई संस्कृतिमा लिंग नभनेर शिश्न भनिन्छ। त्यसैले शिवलिंग भनेको शिवको तुरी भन्ने बुझाइ नै गलत छ। अर्को कुरा आकारको हो। आकार किन त्यस्तो भन्दा त्यो हाम्रो सोचको उपज हो। पुरानो समयमा दिपकलाई हेरेर ध्यान गर्ने भए पनि दिपक हावाले गर्दा स्थिर नहुने हुँदा स्थिर वस्तुका रुपमा शिवलिंगलाई स्थापना गर्ने गरिएको हो।
यस्तै अर्को मत अनुसार शिवलिंग शिवको लिंगभन्दा पनि सृष्टिको प्रतिक हो। शिवलिंगमा महिला र पुरुषको जननेन्द्रिय जनाउने संकेत हुन्छ जसले सृष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। ठाडो भागको आधार महिलाको जननेन्द्रीय आकारको पत्थरमा अडेको हुन्छ। भारतीय धर्मगुरू शद्गुरुका अनुसार त्यो महिलाको गर्भ भित्रको आकृति हो। समागमका बेला स्त्रीको गर्भ भित्रको आकृति हो। गर्भ अर्थात सृष्टिको थलो। यसरी शिवलिंगको अनेकन व्याख्या पाइन्छन्।
अब त्यसलाई सतही रुपमा ठाडो देखियो ठाडो त पुरुषको जनजनेन्द्रीय मात्रै हुन्छ। त्यसैले हिन्दु धर्मले पुरुषको जननेन्द्रीय पूजा गर्न लायो भन्ने तर्क राख्नु अल्पज्ञान हुन्छ।
रामायण पनि धेरै अघिदेखि आलोचनाको शिकार भएको छ। खास गरी रामको सितासँगको व्यवहारले त्यसो भएको हो। आलेखमा पनि रामभन्दा रावणलाई उच्च स्थानमा राखेको छ। कारण उसले अर्काकी स्वास्नी हरण गरे पनि हात लगाएन र ससम्मान राख्यो। यो तर्क आफैंमा हास्यास्पद छ।
अर्काकी स्वास्नी जोगीको भेषमा आएर छल गरेर अपहरण गर्नु कसरी सही भयो? अर्को रामले अग्नीपरीक्षा लिन लाएको र पछि गर्भीणी अवस्थामा वनवास पठाएको प्रसंगले पनि राम कलंकित भएका छन्।
रामायणको कथा रामायणमा मात्रै सिमित छैन। त्यसको सुरुवात रामायण कालभन्दा अघि देखि छ। जस्तो रावण विष्णुको द्वारपालको अवतार मानिन्छ जो आफ्नो मुक्तिको लागि रामका हातबाट मारिन चाहन्थ्यो। त्यसैले सिता हरण लगायतका घटनाहरू घटे। रावणको इज्ज्त त रामले स्वयम् पनि गरेका थिए त्यसैले न मृत्यु शैय्यामा हुँदा रावणसँग अर्ती माग्ने काम गरे। ऊ त कथाको माग नै त्यस्तै थियो कि रावणलाई मार्नु पर्‍यो।
विवाहअघि गर्भबोक्ने र फरक फरक पतिको सन्तान जन्माउने कुन्तीलाई कसैले अपमान गरेको छ र ?
– सेतो पाटीबाट रमण पनेरूको लेख ।
सीके राउतसँग होइन, प्रचण्डको तुलना माओ, स्टालिन र लेनिनसँग हुन्छ : दिलनिशानी
छि- हाम्रो मानसिकता ! – विनोद त्रिपाठी
गणतन्त्रको ब्याज खाएर बालकृष्णको बिरोधमा किन डकार्छौ रबिन्द्र दाई ?
म बेश्या रे !
के हो सिन्डिकेट ? जानी राख्नुहोस्